Zvemukati Zvekushambadzira Zvinochinja Sei Kutengesa Kwako? | Martech Zone
Pandakatanga kunyora zita reichi chinyorwa, ndakanyora Zvinoita Sei asi ini pachokwadi handitendi makambani akawandisa anonzwisisa mashandisiro anoita imwe kune imwe saka ndakaichinja kuita Unofanira Sei. Isu tinowanzowona machena mapepa uye nyaya dzenyaya dzakaburitswa nevemakambani ekushambadzira ayo akapihwa chiratidzo chakakwana, akanyorwa zvakakwana, uye akaiswa zvakanaka. Asi isu tinowana kuratidzwa nechikwata chekutengesa chakabuda uye isu tinoona mharidzo iri nyore kutyisa.
Izvo hazvisi kupomera dhipatimendi rekutengesa uye kurumbidza iro rekushambadzira dhipatimendi. Izvo chaizvo zvinoreva kuti zvemukati zvekushambadzira hazvina kukosheswa neboka revatengesi uye zvinodzivirirwa zvachose. Izvo zvinogona kunongedzera kuchinetso chakakura uko kushambadzira kusiri kutyaira mushanyi kuburikidza nekutengesa. Kazhinji kazhinji mune izvo zviitiko timu yekutengesa iri kupopota nezve mhando yemitungamiriri uye dhipatimendi rekushambadzira riri kupopota kuti timu yekutengesa haigoni kuvhara chero chinhu.
Zvemukati Kushambadzira inzira inobatsira kuburitsa kuziva uye kufarira kuburikidza nekufunga, kunakidza, uye kuita zvemukati. Asi zvikwata zvekutengesa zvinofanirwa kuendesa zvakafanana zvirimo. Mushure mezvose, vatengi vari kuwedzera kubviswa kubva kuchikwata chekutengesa mukati mekutengesa nzira. Izvi zvinoreva kuti kubatanidzwa kwega kwega kunofanirwa kuve kwakakosha kwazvo. Uye zvinoreva kuti vatengi vanofanirwa kuve nezvakakosha zvemukati kuti vavake yavo bhizinesi kesi mukati. Kukosha kwemukati mukutengesa kwacho kwakatitungamira kuti titsanangure zvinoreva Kutengesa kweMukati: Zvemukati Kutengesa zvinobatsira kutengesa kuwana, kununura, uye kuteedzera kushanda kwemameseji anoendesa mberi kuita kwekutengesa. Daniel Chalef, RuzivoTree
Vatengesi zvikwata vanogona kutora mukana wezvinoitika zvemukati kutengesa. Kushambadzira kunogona kugonesa kutengesa nezvidzidzo zvavakadzidza kuburikidza neMukati meKushambadzira - sezvinoonekwa mune ino infographic kubva kuZivoTree, Zvemukati Kushambadzira, Sangana Zvemukati Kutengesa.
Tags: Zvakanakisa zvemukatikukosha kwemukatiContent Marketingzvemukati kutengesazvemukati kutengesa infographicinfographicpima zvemukati zvinobudirirazvirimokunongedza zvemukati